Nhaurirano Pakati peZanu-PF neMDC Dzoita Mangange
Ndira 22, 2010
SADC inotiwo yaneta nenyaya yenhaurirano idzi nekudaro dzinofanira kuti dzichipetwa.
Komiti inoona nezvemafambisirwo ezvinhu muMDC inotungamirwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, yakasangana muHarare neChishanu, ikazeya nyaya yekusapera kwenhaurirano pakati payo neZanu-PF.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti MDC iri kuronga kudzokera kuSADC, sezvo pasina kana chimwe chete chakatenderanwa panhaurirano dzakayedza kuitwa neChitatu.
MDC inoti nhaurirano dzaita mangange, uye hapachina chichakwanisa kuitwa, nokudaro SADC inofanirwa kupindira zvakare mugakava iri. MDC inotiwo kana zvenhaurirano zvanetsa, zviri nano kuti parongwe sarudzo dzakachena gore rinouya chairo.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanotiwo vakuru veZanu-PF vakatoti mudzimu waro bonga kuona huku dzichirwa, apo munyori anoona nezvekudyidzana kweBritain nedzimwe nyika, VaDavid Milliband, vakaudza dare renyika yavo nechipiri kuti vachabvisa zvirango zvakatemerwa vakuru veZanu-PF kana nyika yavo ichinge vaona kuti mapato ose ari muhurumende atevedzera chibvumirano che Global Political Agreement. Vakatiwo vachanzwawo pfungwa dzeMDC, kana iri kufara nezviri kuitika muhurumende.
Asi Zanu PF yava kutora mashoko aya ichiti MDC ngaitange yagadzirisa nyaya yezvirango kuitira kuti zvibviswe.
Gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vari kurambawo mashoko ekuti bato ravo ndiro vari kuita kuti zvinhu zvisafambe munhaurirano.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, VaCharles Ray, vakaudza vatori venhau kuti vari kutungamira mapato matatu muhurumende, vanofanirwa kuzvidzora sevatungamiri kwete kuramba vakaomesa musoro uku veruzhinji vachiyaura.
VaTsvangirai vari kunetsana naVaMugabe panyaya yavo yekugadza gavhuna webhanga guru renyika, VaGideon Gono, pamwe nemuchuchisi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana, vasina kugara pasi nevamwe vavo vari muhurumende sezvinodiwa nechibvumirano chavakanyorerana.
VaPhilip Pasirayi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCentre for Community Development. VaPasirayi vanoti kusavimbika kweZanu-PF munhaurirano ndiko kuri kupa kuti nhaurirano dzisapere nenguva.